Boordichi koorniyaa idileessurratti waldaalee siiviilii waliin mari’ataa jira – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Boordichi koorniyaa idileessurratti waldaalee siiviilii waliin mari’ataa jira
Finfinnee, Amajjii 6, 2013 (FBC) –Boordiin Filannoo Biyyaaleessa qorannoo biyyaalessaa sirna koorniyaa idileessuurratti waldaalee siiviilii waliin marii taasiisaa jira.
Boordichi filannoo biyyaalessaa marsaa 5ffaa dhufu keessatti hirmaannaa siyaasaa dubartootaa giddisuuf hojjechaa jiraachuu ibseera.
Qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta’uun hirmaannaa dubartoonni paartilee siyaasaa keessatti qabanii fi sanadoota sirna koorniyaa paartilee siyaasaa ilaalchisee qorannoo gaggeesseera.
Hirmaannaan dubartoonni siyaasa keessatti qaban gadi aanaa ta’uu qorannoon gaggeeffame ni agarsiisa jedhan itti aanaa walitti qabaan Boordii Filannoo Biyyaaleessa Ityoophiyaa obbo Wubsheet Ayyalaan ibsaniiru.
Qorannichaan paartileen siyaasaa 70 hammatamaniiru jedhan.
Paartilee kanneen keessa hirmaannaa koorniyaa fooyya’aa kan qaban paartilee 6 qofa ta’uu ibsameera.
Paartilee Siyaasaa qorannoon hammataman keessaa kanneen dubartoota caasaa paartichaa keessa galchan 21 qofa ta’uu himameera.
Waliigala gala % 90 sirna koorniyaa kanneen hin kabajne ta’uu ibsameera.
Waldaaleen siivilii dhimma kana hubachuun hirmaannaa dubartootaa siyaasa keessatti dabaluu fi lakkoofsa hoggantoota dubartootaa paartilee siyaasaa keessatti qaban guddisuuf akka hojjetan obbo Wubsheet yaadachiisaniiru.
Zaman Bayyanaatu gabaase.
Fuula Feesbuukii keenyan dabalata odeeffannoo waqtaawaa argachuuf; Teelegraama keenya https://t.me/afanoromofana subiskiraayib godhaa.
Twiitara keenya https://twitter.com/fanatelevision nu duukaa bu’aa Yeroo maraa nu waliin waan taataniif isin galateeffanna.
Komishiniin hoggansa sodaa balaa biyyaalessaa naannoo Tigraayitti deeggarsa taasiise
Ityoophiyaatti namoonni dabalataa 351 vaayrasii koroonaan qabamuu ibsame
Boordiin Filannoo Biyyaalessa Ityoophiyaa beekkamtii seeraa ABUT haquu beeksiise
Ityoophiyaanoonni 336 Sawuud Arabiyaa irraa gara biyyaa deebi’an
Leenjiin haaromsaa kan kennameefi miseensoonni poolisii…
MM Dr. Abiy Ahimad hordoftoota amantaa Kirstaanaa maraaf…
Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo marsaa 6ffaa bara…
Yuunvarsiitiin Rifti Vaalii Kaampaasii Amboo marsaa 5ffaaf…
Komishiniin hoggansa sodaa balaa biyyaalessaa naannoo…
Ityoophiyaatti namoonni dabalataa 351 vaayrasii koroonaan…
Boordiin Filannoo Biyyaalessa Ityoophiyaa beekkamtii seeraa…
Oduu biyya keessaa5044